2015 Valentine Day ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များနှင့်လုပ်ပါရန်အရာ
Topic:2013 Valentine Day ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များValentine Day ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များ
အားဖြင့် Posted: Bhose ဇန္နဝါရီလ 27, 2015
ချစ်သူများနေ့ နောက်တဖန်အများကြီးထောင့်လှည့်ပတ်ဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သအထူးတစ်စုံတစ်ဦးကမှအဖြစ်အထူးလက်ဆောင်များဆက်သသောအရာကိုအံ့သြခဲ့ကြရပါမည်. လူတိုင်းသိတယ်အဖြစ်, Valentine Day ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးကျင်းပကြောင်းနှစ်စဉ်ရင်ခုန်စရာအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့သင့်အိမ်ထောင်ဖက်မှရင်ခုန်စရာကျေးဇူးတင်ကြောင်းအချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်, ချစ်မြတ်နိုးတဲ့, သငျတို့သကိုချစ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ. နိုင်ဂျီးရီးယားကနေနီပေါမှ, ကွန်ဂိုကနေဗာတီကန်မှ, တောင်အာဖရိကကနေအာဂျင်တီးနားမှ, နှင့်တိုက်ကြီးကနေတိုက်ကြီးမှ, Valentine Day ကိုအဟောင်းနောက်တဖန်နှလုံးမှာငယ်ရွယ်ဖြစ်လာသည့်အခါတစ်ဦးရင်ခုန်စရာအခါသမယဖြစ်ပါသည်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်း၏ရတာဟာအတွက်နုပျိုဗျာဒိတ်ကျမ်း. ဟုတ်ကဲ့, မေတ္တာရှင်နှင့်ခစျြတျောမူခံရ. ထိုအခါမူကား,, ဒီတကမ္ဘာလုံးရင်ခုန်စရာအခါသမယကလူနှစ်ကနဦးစိန်ခေါ်မှုများတစ်ကမ္ဘာလုံးတင်ဆက်: ဘာလုပ်မလဲ, သို့မဟုတ်အမှုအရာတစ်ဦး Valentine Day ကိုပေါ်လုပ်ဖို့; တစ်ဦး Valentine Day ကိုအခါသမယနှင့်ဆုကြေးဇူးကိုစိတ်ကူးများ. ၏ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးစိန်ခေါ်မှုယူကြပါစို့, အဆင်ပြေ?
1. တစ်ဦး Valentine Day ကိုပေါ်ပြုပါရန်အမှုအရာ
သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး Valentine Day ကိုပေါ်ရှိသင့်ချစ်သူကိုနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်း၏ဆုံးရှုံးမှုမှာဖြစ်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်မဟုတ်ဘူး. သို့သော်အောက်ပါဘာလုပ်ရမှန်းအပေါ်ကောင်းတစ်ဦးဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်:
ကိုယ့်. တစ်ဦးရင်ခုန်စရာနေ့စွဲအပေါ် Go: သင်ကမ်းခြေကိုသွားသည့်အခါ Valentine Day ကို၏ဝိညာဉ်ကိုတက်သင့်ရဲ့အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကရာသီနဲ့ရင်ခုန်စရာနေ့စွဲအပေါ် Going, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များ, Orlando တွင်အဆိုပါဒစ္စနေးကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့တူနှင့်ခရီးသွားအပန်းဖြေ, ဖလော်ရီဒါ, သို့မဟုတ်ပဲသင်ရုံသင့်ရဲ့နှစ်သက်ရဲ့မျက်လုံးတွေသို့ကြည့်နှင့်ချစ်ခြင်း၏နက်နဲသောပင်လယ်နိုငျအောငျရှိရာတစ်ဦးကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ၏တိတ်ဆိတ်တဲ့ချောင်ဧရိယာထဲမှာသင်အကြိုက်ဆုံး menu ကိုအဘို့အမိန့်တစ်ခုစားသောက်ဆိုင်သွားရောက်လည်ပတ်.
ii. အထူးဟင်းချက်ပြုတ်: အခန်းကဏ္ဍနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးအပြောင်းအလဲအတွက်အဘို့သင့်ဇနီးသို့မဟုတ်ရည်းစားများအတွက်ထူးခြားဆန်းပြားချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူအထူးဟင်းချက်ပြုတ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ; သူမသိပ်မေတ္တာအထူးပန်းကန်နှင့်အတူအိပ်ရာအတွက်သူမ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်စိတ်ကူး. ထိုသို့သောနည်းနည်းလုပ်ရပ်များအထူးအမှတ်တရများရောက်လာပြီရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအောက်မေ့ရမှ Valentine Day ကိုတစ်နေ့လုပ်.
2. Valentine Day ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များ
ဒီပှဲကငျြးပဘို့လက်ဆောင်ပေးမယ်စိတ်ကူးများ 2015 Valentine Day ကိုအခါသမယသုံးဒေသများသို့ခွဲခြားစေခြင်းငှါ: လူတို့သညျအဘို့အလက်ဆောင်ပေးမယ်စိတ်ကူးများ; မိန်းမတို့အဘို့ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ; ကလေးတွေနှင့်ဆုကြေးဇူးကိုစိတ်ကူးများ, နှင့်အခြားသူများ.
တစ်ဦး. လူတို့သညျအဘို့အ Valentine Day ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုစိတ်ကူးများ: Valentine Day ကိုနဲ့တူရင်ခုန်စရာအခါသမယများအတွက်သူ့ကိုဝယ်ဖို့အဘယ်အရာကိုလက်ဆောင်တွေကိုသိနိုင်မည်ရန်သင့်လူတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှုအရာများနှင့်ဦးစားပေးနားလည်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်. သင့်ရဲ့လူတဦးအားကစားသမားဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ကျောင်းသား, ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်, အနုပညာရှင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ် bookman? မိမိအဦးစားပေးကဘာတွေလဲ, နှင့်သူ၏စတိုင်များဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဤအရာအသိပညာကိုသင်လိုအပ်ပေးကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း 2015 Valentine Day ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုစိတ်ကူးများ သင်လိုအပ်. ထိုအခါမူကား,, အောက်ပါသင်တို့သည်လူတို့အားပေးနိုင်သောဆုကြေးဇူးအတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်း:
စာအုပ်တွေနဲ့ CD များ
ခ. မိန်းမတို့အဘို့ Valentine Day ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုစိတ်ကူးများ: အမြိုးသမီးမြားကိုယေဘုယျအားပျော့ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ဆောင်တွေကိုချစ်, သင်သည်သင်၏အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကိုခစျြကိုသိနှင့်အခြားသူများအကြားရှိသည်ဖို့ချင်ပါတယ်လျှင်ကြောင့်လည်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သငျသညျအောကျပါထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင် 2015 သင့်ရဲ့မိန်းမသည် Valentine Day ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုစိတ်ကူးများ:
ချောကလက်နှင့် vanilla လိမ်းဆေး
က c. ကလေးတွေအဘို့အချစ်သူများနေ့ရဲ့နေ့ရက်များဆုကြေးဇူးကိုစိတ်ကူးများ: ကလေးများမကြာခဏ Valentine Day ကို၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပေါ်ထွက်လက်လွတ်မ, နှင့်ဒီရင်ခုန်စရာကာလအတွင်းလေးတွေအဘို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါအောက်ပါလက်ဆောင်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆဖြစ်စေခြင်းငှါ,:
ပညာရေးဆိုင်ရာ CDs / DVDs
ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်း, ကတ်များ, နှင့်ဆင်မြန်းစသည်တို့ကို.
ဃ. တခြားသူတွေကို Valentine Day ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုစိတ်ကူးများ: သင်သည်သင်၏သူဌေးကရန်သင့်မေတ္တာနှင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကြောင့်လိုအပ်သောတွေ့ပါလိမ့်မယ်, အိမ်ပိုင်ရှင်, မောင်းသူ, အလုပျသမား, အိမျနီးခငျြးမြား, ဒီကာလအတွင်းနှင့်အပေါင်းအသင်း. အထက်ပါဖော်ပြထားသောဆုကြေးဇူးကိုစိတ်ကူးများအပြင်, သငျသညျအညီအမျှအောက်ပါစဉ်းစားပါနဲ့တောင်မှသင့်ရဲ့အထူးသဖြင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန်သူတို့ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းငှါ,:
bonsai တူသောထူးခြားဆန်းပြားအပင်, သစ်ခွ, poinsettias, နှင်း, ရှားစောင်းပင်, နှင့် tulips စသည်တို့ကို.
ပုံရိပ်တွေကရက်ဒစ်: www.crazy-frankenstein.com & www.bharatmoms.com
3 မှတ်ချက်များ အပေါ် "2015 Valentine Day ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များနှင့်လုပ်ပါရန်အရာ"
Clement | ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2013 တွင် 10:28 နံနက် | ပြန်ကြားချက်
နိုင်ဂျီးရီးယား Celebrity ဘလော့ | ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2013 တွင် 9:25 ညနေ | ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် vals နေ့ကအကြံပေးချက်များ. nice တဦးတည်းပွူ.
Adeyemi Adisa | ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2013 တွင် 2:23 နံနက် | ပြန်ကြားချက်
အလွန်ကောင်းတဲ့ post ကို. ကိုယ့်သင့်ရဲ့ Blog ကိုအပေါ်သို့လဲငါတကယ်သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များန်းကျင် surfing ခံစားင့်ဆိုစေလိုကြောင်း. မည်သည့်ကိစ္စတွင်ငါသည်သင်တို့၏အစာကျွေးဖို့စာရင်းပေးသွင်းခြင်းပါလိမ့်မယ်သင်တို့ကိုငါမကြာမီနောက်တဖန်ရေးထားမျှော်လင့်ပါတယ်!